Soomaaliland oo ku dhawaaqdey Arin halis ku ah Somalia & Xaduudaheeda oo maanta la xiraay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Soomaaliland oo ku dhawaaqdey Arin halis ku ah Somalia & Xaduudaheeda...
Soomaaliland oo ku dhawaaqdey Arin halis ku ah Somalia & Xaduudaheeda oo maanta la xiraay
Previous articleCovid-19:- Hindiya waxaa la buux dhaafiyay dukaamada raashinka iyo farmashiyada halka Masarna bandow lagu soo rogay.
Next articleXOG:Dhismaha Garoonka Ciyaaraha Muqdisho miyuu dhamaaday mise waxbaa dhiman?
Senegal, Morocco iyo Tunisia oo laga helay Kiiska Coronavirus.
Maxay noqoneysaa xaaladda mintidiinta IS ee waddamadoodi laga diiday?
Masjid 800- sano kahor laga dhisay Muqdisho oo dib u dhis lagu sameeyay (Daawo Sawirada)
DF oo sameysay liis loogu yeeray 100-ka qof ee ugu saameynta badan Somalida iyo arin fadeexad ah oo…
Farmaajo oo dhalleeceyn kala kulmay dhaawacyadii ‘uu ugu tagay’ diyaaradda
XOG: Ciidamo Ku Heyb Sheikh Shariif Oo Gudaha U Soo Galay Muqdisho & Abaabul Dagaal Oo Socda…..
Daawo“Al-Shabaab Hargeysa ayey degan yihiin, Laascaanood ayayna qabsan doonaan”waxaa sidaa yiri….